Shirarka uu hogaamiyo Ardayga Hoose - Dugsiga Caalamiga ah ee Lyon
Hiigsigeena, Himiladayada iyo Qiimahayada
Soo Dhaweynta Agaasimaha
Ka shaqaynta ISL
Ku saabsan ISL
Ku saabsan ISL PTA
Daqiiqadaha Kulanka PTA
Ka baadh maktabadeena ↗
La shaqee ↗
8am ilaa 4pm
Xulayaasha Nooca Boostada
Ka raadi qoraalada
Shirarka Asaasiga ah ee Ardaygu Hogaaminayo
09 / 04 / 20222021-2022 Sannad Dugsiyeedkaby ISL
Waxaan ku faraxsanahay inaan furno albaabbadayada oo aan ku martiqaadno EYU iyo Waalidiinta Aasaasiga ah Shirarkayaga Hogaaminayo Ardayga.
Arday kasta oo ay taageerayaan macalimiintooda ayaa la doortay Waxqabadyada soo bandhigay waxbarashadooda ee meelo kala duwan oo manhaj ah. Ardaydu waxay qaateen doorkii macalinimo waxayna u sharxeen hawlihii loo igmaday waalidiintood oo markaasi dhameeyay hawlihii loo igmaday. Sidoo kale madadaalo badan, shirarku waxay dhiirigeliyaan hay'adda ardayda, taageeraan horumarinta Profile-ka bartaha PYP waxayna muujiyaan hababka ilma kasta ee waxbarashada.
Aad ayaan ugu hanweynahay “macalimiintayada tababarayaasha ah”!
Ciyaarta Xorta ah ee TK/PreK
Toddobaadka Buugga 2022
Weligaa ha seegin qoraal! Si aad isu diiwaan geliso toddobaadlaha ah ee warkeena, ku bixi ciwaanka emailka hoose
Xaqiiji (Fiiro gaar ah: waxaanu ilaalinaa xogtaada sir ah waxaanan la wadaagnaa kaliya dhinacyada saddexaad ee suurtogalka ka dhigaya adeeggan. Akhri Siyaasaddayada Qarsoonnimada oo buuxda.)
Iskuulka Caalamiga ah of
Wax ka beddel dookhyada buskudka
Dugsiga Caalamiga ah ee Lyon waxaa naga go'an inaan ka caawino ardaydeena inay buuxiyaan kartidooda shakhsi ahaaneed iyo tan tacliimeed iyada oo loo marayo horumarinta madaxbannaanida, jacaylka nolosha oo dhan ee waxbarashada iyo dareenka fahamka iyo ixtiraamka dhaqamada dhexdooda.
Waxa na aqoonsaday ama xubno ka mid ah:
Waxaan u adeegnaa buskudka. Haddii aad u malaynayso inay taasi sax tahay, kaliya dhagsii "Aqbal dhammaan". Waxa kale oo aad dooran kartaa nooca cookies-ka aad rabto adiga oo gujinaya "Settings". Akhri siyaasaddayada buskudka
Settings Aqbal dhamaan
Dooro nooca cookies ee la aqbali karo. Doorashadaadu waxay kaydsan doontaa hal sano. Akhri siyaasaddayada buskudka
Kukiyadani maaha mid ikhtiyaari ah. Waxay u baahan yihiin si uu shabakadu u shaqeyso.
Si aan u wanaajino shaqada mareegaha iyo qaab-dhismeedka, iyadoo laga duulayo sida loo isticmaalo shabakadda.
Kukiyadani waxay xaqiijinayaan in shabakadayadu u shaqeyso sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah inta lagu jiro booqashadaada. Haddii aad diido cookies-kan, shaqaynta qaar ayaa ka lumi doonta mareegaha (tusaale maab maqan, dukumeenti, iyo qalab turjumaad oo jaban).
Markaad wadaagto danahaaga iyo dhaqankaaga markaad booqato boggayaga, waxaad kordhinaysaa fursada aad ku aragto macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo soo jeedinta.
Save Aqbal dhamaan